अहिलेका मोटरसाइकल र कारमा चैत १९ पछि आउने इन्धन हाल्दा कस्तो असर पर्ला ? – Hamrosandesh.com
अहिलेका मोटरसाइकल र कारमा चैत १९ पछि आउने इन्धन हाल्दा कस्तो असर पर्ला ?
काठमाडाैं,५ चैत्र ।
नेपालमा बीएस ६ मापदण्डको सवारीसाधन आउन सुरु भएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी बीएस ६ इन्जिनयुक्त गाडी मारुती सुजुकीले ल्याएको छ भने कियाले एउटा मोडल सेल्टोस र फोर्डले एउटा मोडल इकोस्पोर्ट बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
तर, नेपालमा अहिले गुडिरहेका अधिकांश कार तथा मोटरसाइकल बीएस ४ मापदण्डमा आधारित रहेका छन् । नेपाल आयल निगमले यही चैतको १९ गतेबाट बीएस ६ मापदण्डको इन्धन ल्याउने जनाएको छ । यस्तोमा बीएस ६ मापदण्डको तेल बीएस ४ गाडीमा प्रयोग गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो ।
अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेका र चलिरहेका गाडीमा बीएस ६ मापदण्डको इन्धन राख्दा पर्ने असको बारेमा जानकारी दिने हामीले प्रयास गरेका छौं ।
के फरक बीएस ६ मापदण्डको इन्धन
बीएस ६ मापदण्डको इन्धनमा पार्टिकुलेट म्याटरको मात्रा घट्ने छ । जसको कारण सवारीसाधनले गर्ने प्रदुषणमा कमी आउने छ ।
साथै, युरो ६ मापदण्डको पेट्रोलियम पदार्थमा सल्फर कन्टेन्ट कम हुने छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सल्फर कन्टेन्ट जति कम हुन्छ त्यतिनै वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ । यस्तोमा नयाँ मापदण्डको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा त्यसले सवारी साधनको आयुमा समेत फरक पार्नेछ ।
पेट्रोल इन्जिनयुक्त कार तथा मोटरसाइकलमा असर
अहिले मोटरसायकल तथा कार चढिरहेका मानिससँग बीएस ४ मापदण्डको गाडी रहेको छ । अब चैत अन्तिमबाट आउने सबै इन्धन बीएस ६ मापदण्डको हुँने हुँदा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता धेरैमा रहेको पाइन्छ ।
नयाँ मापदण्डको इन्धनले बीएस ४ पेट्रोल इन्जिनमा कुनै किसिमको असर गर्दैन । बरु थप केही फाइदा पाउन सकिन्छ । यस्ता सवारसिाधनको पर्फमेन्स केही बढ्ने छ भने प्रदुषणको मात्रा पनि केही कम हुने छ । त्यसैले यो तपाईको लागि खुसीको समाचार हो ।
बीएस ४ डिजेल इन्जिनयुक्त कार
मोटरसाइकल डिजेल इन्जिनमा नहसँने हुँदा डिजेल कारमा मात्रै यसको असर देखिने छ । सुरुवाति दिनमा खासै असर नदेखिएपनि पछि माइलेजमा निकै ठूलो असर पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । नयाँ बीएस ६ मापदण्डको तेलमा सल्फरको मात्रा १० मिलिग्राम प्रति केजी रहन्छ । तर, बीएस ४ मापदण्डको तेलमा यसको मात्रा ५० मिलिग्राम प्रतिकेजी रहेको थियो । यसले प्रत्यक्ष असर गाडीको माइलेजमा पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।